Dowladda oo xaqiijsay in la cilad bixiyay ciladdii ku timid Turkish Airlines | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowladda oo xaqiijsay in la cilad bixiyay ciladdii ku timid Turkish Airlines
Diyaaradda Turkish Airlines ayay shalay hawada ku qabsatay cilad, ka dib markii ay ka duushay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, iyadoona si nabadgelyo leh dib uga soo cago-dhigatay garoonkaasi.
Diyaaradan oo 207 rakaab ah ka qaaday Magaalada Muqdisho ayaa ku wajahneyd dalka Turkiga, waxayse ciladda ku timid oo ka dhalatay dhinaca Oxygen-ka ay la kulantay, xilli ay sii galeysay hawada dalka Itoobiya, iyadoo markii dambena si deg deg ahi ugu soo laabatay Magaalada Muqdisho.
Masuuliyiinta Hay’adda Duulista Hawada ee Somaliya ayaa Wakaaladda Wararka Qaranka u sheegay in la cilad bixiyay ciladdii ku timid diyaaradaasi, ka gadaal markii ay dib u eegis ku sameeyeen injineerada duulimaadka.
“Diyaaradda ayaa waxa ay saacaddu marka ay aheyd 1:15 ka duushay Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, waxaana markii ay ku dhaweyd hawada dalka itoobia ku timid cilad, hase ahaatee markii dambe waxa ay si nabad ah dib ugu soo laabatay Garoonka Aadan Cadde, iyadoo nabad qabta, mana jirto halis hadda.” Ayay ku warantay SONNA.
Turkish Airlines oo loo hagaajiyay xiriirka duulimaadka ayaa dib uga duushay Garoonka Aadan Cadde, iyadoona horey u sii wadatay duulimaadkeedii ku wajahnaa dalkaasi Turkiga.
Turkish Airlines ayaa noqotay shirkaddii diyaaradeed ee heer caalamiya oo duulimaadyo toos ah ka bilowda dalka, sanadkii 2012, waxayna caalamka u muujisay in la taggi karo Magaalada Muqdisho.
Turkiga waa saaxiibka ugu weyn ee maanta Soomaali leedahay, iyadoo uu dalka ku qarash-hareeyay hal bilyan oo dollar, oo uu ku bixiyay arrimaha gargaarka iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka.
Dowladda oo xaqiijsay in la cilad bixiyay ciladdii ku timid Turkish Airlines was last modified: August 31st, 2020 by Admin
AMISOM oo duqeysay deegaan ka tirsan Shabeelaha Hoose oo ciidanka dowladda gacanta ku hayaan